समाज Archives - Sudur Khabar
जाडो मौसममा चिसो हावा चल्नाले बगैंचाका संवेदनशील बिरुवा नाश हुने सम्भावना रहन्छ । बगैंचाको सबैभन्दा सुन्दर बिरुवा गुलाबलाई जाडो मौसममा सबैभन्दा धेरै हेरचाहको आवश्यकता पर्छ । गुलाबको फूलका पात सबैभन्दा धेरै कमजोर हुन्छन् । तापक्रम घट्दा वा बढ्दा सबैभन्दा धेरै असर यिनै पातमा पर्छ । त्यसैले, जाडो......
सुदूर खबर, दार्चुला, पुस २९ । दार्चुलाको लटीनाथ स्वास्थ्यचौकीले घरमै सुत्केरी गराउने, गर्भ जाँच नगर्ने नगराउनेलाई दण्डित गर्ने भएको छ । बिहीबार स्वास्थ्यचौकीमा बसेको स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिको बैठकले घरमै सुत्केरी गराउने र गर्भ जाँच नगर्नेलाई एक हजार रुपैयाँ जरिवाना र गाविसबाट दिइने सेवा सुविधा......
धुर्मुस–सुन्तलीले आफूलाई मुसहर ठानेपछि ….
महोत्तरी, पुस २५ । महोत्तरीको बर्दिवास–२ मा एकीकृत नमुना मुसहर बस्ती निर्माणमा जुटेका हाँस्यकलाकार धुर्मुस र सुन्तलीले आफूहरुको थर ‘सदा’ भन्न आग्रह गरेका छन् ।
तराईको पिछडिएको मुसहर जातिको बस्तीमा नमुना काम गर्न बर्दिवास आएको यो जोडिले आइतबार बर्दिवास नगरपालिकाले आयोजन गरेको कार्यक्रममा हाँस्य......
माघ १ गते, एउटा टुडिखेलमा दुर्इवटा माघि हुने
काठमाडौं, पुस २४ गते । काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने थारु समुदायले यस वर्ष पनि माघ १ गते काठमाडौंको टुँडीखेलमा भव्य माघी महोत्सव २०७३ आयोजना गर्ने भएका छन्। यसअघि काठमाडौंमा एक ठाउँमा माघी महोत्सव मनाइदै आएको भए पनि गत साल २०७२ देखि काठमाडौंमा दुई ठाउँमा माघी महोत्सव हुँदैआएको छ। यस वर्ष......
फेसबुकमा लभ परेर होटल बोलाएकी महिला आफ्नै श्रीमती परेपछि
रोल्पा, २० पुस । बाबुको मृत्यु र आमाको दोस्रो बिहेपछि रोल्पाको धबाङमा तीन नाबालकले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । छोराछोरी श्रीमती र वृद्ध आमाबाबुको सपना साकार पार्ने लक्ष्य बोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका धबाङ–८ रोल्पाका २६ वर्षीय लुकबहादुर वलीको केहीवर्ष पहिले बिजुलीमा काम गर्ने......
खर्चको अभाबमा बर्दियाका गणेश चौधरी अस्पतालमा छटपटाउदै !
काठमाण्डौ – अतिनै गरीब तथा दयनीय परिवारका बर्दिया जिल्ला ढाेढरी गाबिस – १ को २१ बर्षका गणेश चौधरी करोड़मा २/४ हुने HLH (Hemophagocytic lymphohistocytosis)भनिने रोग लागेर काठमाडौं बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालको क्याबिन नम्बर ३०९ मा सिकिस्त अबस्थामा रहेका छन l अहिले उनी उपचार खर्चको अभाबमा अस्पतालको शैयामा कसैको सहयोगको आशा......
अहिले सवारीसाधन प्रयोग गरेर रारा पुग्ने पर्यटक दैलेखको माथिल्लो ढुङ्गेश्वर......
आमा आईसियुमा, बुबा प्रहरी हिरासतमा, चार महिने छोरीलाई कसरी बचाउन ? फोटो फिचरसहित !
उदयपुर, पुस १५ – दुई हप्ता अघि श्रीमानको कुटाइबाट सिकिस्त बिरामी भएकी उदयपुरकी सरिता मोतेका नाबालक छोराछोरी बिचल्लीमा परेका छन् । उदयपुरको भलायडाँडा– ३ कि सरितालाई श्रीमान जीवनले पुस १ गते कुटपिट गरेपछि उनी अस्पताल भर्ना भइन् । श्रीमानलाई प्रहरीले पक्रियो । आमा अस्पताल भर्ना र बुबा प्रहरी हिरासतमा......